Warbixin – Safarkii Marwo Caasha Geelle Diriye ee Boston. – Radio Daljir
Boston, Nov 21 – Wasiiradda Haweenka iyo Qoyska Caasha Gheelle Diriye oo ka jawaabtey casumaad ey u fidiyeen Ururka Qurbajoogta Puntland (PDF) ee Boston, Massachusetts.
Waxaa Wasiirada Caasha Gheelle Diriye ku qaabishay madaarka Boston (Boston Logan International Airport) November 13, 2009 Marwo Shahmaad Xalwo oo ka tirsan golahaQurbajoogta Puntland qaybta Boston iyo Marwo Armia Yasiin Nur Godane oo iyadana ka mid ah Jaaliyadda qurbajoogta ee Boston, Masachusetts.
Wasiirka ayaa kulamo kala duwan la yeelatay qurbajoogta Puntland ee New England. Xaflad aad u balaaran ayaa maalintii Jimcaha lagu casumay wasiirka. Furitaankii xafalda, waxaa khudbada qiimo leh ka jeediyey halkaas nin sii weyn looga yaqaano magaaladda Boston oo la dhaho Mudane Cusmaan Dhicis oo kana mid ah dadka akhyaarta ah ee gobolkaan , isla markaasna ka mid ah Qurbajoogta reer Puntland. Khudbadda Cusman waxey aheyd mid dhinacyo badan taabatey oo ey ka mid tahey alle ka cabsi, xuquuqda walaalidka, qoyska islamka wajibaadkiisa, iyo barbaarinta ubadka iyo arimo kale oo fara badan.
Waxaa isna halkaas ka jeediyey khudbad gaaban Mudane Abdullah Gurhan (madey), Abdullahi waxey khudbadiisii dulucdeedu aheyd soo dhaweynta Wasiiradda Haweenka iyo Horumarinka iyo mahadcelin ku soo socotey dhammaan Dadkii soo abaabuley xafladda , qurbajoogta reer puntland iyo dhammaan jaaliyadda reer Boston.
Waxaa kale oo halkaas ka hadley Erkoolino, wuxuu soo dhaweeyey Wasiir Caasha Gheelle Diriye, isaga oo yiri wanaagaaga horey buu noo soo gaaarey, waxaan rabnaa haddii aan nahey qurbajoogta reer puntland inaad naga gaarsiisid dowladda puntland baaq ku saabsan dilal ka dhacey dalka, dad somaaliyeed oo inta la qab qabtey loo dhiibey dowlad shisheeye, gobollo maqan, sugida amaanka puntland, isag oo yiri ?Wixii dhacey weey dhaceen, inta maqan ku weydiin mahayo ee bal inta lahayo hala adkeeyo oo halla sugo?
Kadib, waxaa khudbadii hallkaas ka sii qaatey Mudane Maxamuud Muuse oo ah guddoonka Golaha Qurbajoogta Puntland ee gobolka New England, siiba Massachusetts, wuxuu kale oo uu ka mid yahay Maxamuud 21 qof oo Board members ah ee daladda guud ee Ururka Qurbajoogta reer Puntland. Maxamuud wuxuu ka soo shaqeeyey muddo dheer NGOs siiba kuwa ka hortagida abaaraha. Wuxuu khudbadiisa ku bilaawey asaaskii UrurkA Qurbajoogta Puntland, Ururkaas oo ah kabihii waxa ka maqan Puntland iyo shacabkeeda, sido kale wuxuu taabtey shirkii eey ka qeyb galeen Board reer New england ee ka dhacey Minnisota, MNPLS. Sido, kale wuxuu taabtey baahidda loo qabo in loo istaago Puntland wax qabadkeeda, in la hello biyo macaan, talaalka carurta, tacliinta sidii loo hormarin lahat, sida amniga loo sugi lahaa, wadda shaqeyn loola yeelan lahaa Jamacada diba si ey ardeyda reer Puntland uga faaideystaan, la?aanta,. Mohamud wuxuu kaloo ka hadley sida NGOs iyo dhibaatooyiinka iyo waxyaabaha amni xumida keena oo uu ku tilmaamey iney ka kow tahey gaajadda.
Ka dib, waxaa khudbadii halkaas ka sii watey Marwo Luul Farax Gaalooti oo ka mid ah iyana dadka Qurbajoogta reer Puntland oo degan gobolka Massachusetts, Boston. Luul waa suugan yahan, waxey soo dhaweysey Wasiiradda Caasha Gheelle iyadoo tiri anaga reer Boston nin nagu jirey baad nagala baxdeen oo ey ka wadey Mudane Axmed Cilmi (Karaash), Ka dib waxey sugaan ku cabirtey dhaqanka wasiiradda.
Waxaa ka dib halkaas khudbadii ka sii wadatey Marwo Marian Musse Boqor, soo dhaweyntii Wasiiradda Caasha ka dib waxey ka hadashey doonidii Boston kula jabtey. Waxey tiri mar haddii Caasho caawa nala joogto wax walba waan ka samri karnaa. Waxey khudbadeed taabatey, markii dhulka cusub la yimid tacaliinta caruurta sida ey ula qabsan waayeen iyadda oo sabab uga dhigtey in markii dhulkaan la yimid in ilmaha da?dooda lagu fadhiisiyo iskuulka ee aan lagu fadhiisin heerkee buu marahayey ardeyga amaba heerkee tacaliinta ardeyga marahayaa, taasi dhibaato beey u keentey ardeygii. Waxey kaloo ka hadashey arinta qoyska somaaliyeed ee gurbaha yimid. Waxey Marian xustey iney 30% ey wiilasha gaaraan heer jamacadeed, halka ey 70% ey gabdhu gaaraan heer jamacadeed. Waxey ka hadashey ururadda bulshadda ee ka furan Boston oo ey tiri labana waxaa maamula dumar labana waxaa maamula rag. Waxey kaloo oo ey ka hadashey doorka ragga iyo dumarka somaaliyeed iyo in ey dumarku soo celiyeen dhaqankii balse ragu eysan wali jaan dheertii soo celin. Waxey taabatey in ey magaaladu leedahey dukaamo, makhaayado, hanti guryo ah.
Ka dib, waxaa macarafoonka loo dhiibey Jama Cabdirizaq oo ka mid ah ardeyda jaaliyadda amba qurbajoogta reer Puntland oo degan Boston. Jama wuxuu wali ku jiraa waxbarashadiisii heer jamacadeed ah. Wuxuu Jama yiri hadii aan dhalinyaradda u hadallo, waxaan aan jeceleystey inaan la qeybsado dhibaatadda na heysta oo dadkeena, Waayo, ardeyda na;la dhigata jamacadda iney dalkooda u aadaan iney ku soo sameeyaan intenship dalkooda, Balse anaga taasi nooma surta galin, sababtuna ey tahey amni xumida ka jirta dalkii iyo barnaamij sugan oo aan loo sameyn amabse xariir toos ah, si aan wakhtiyadda fasax ah ugu fa?ideyno dadkeena iyo dalkeena. Tan kale ee noogu dar hadda waxaa weey, haddii aad 21 jir gaartid dhoofida baa caqabad nagu noqotey, iyadda oo airport aduuka lagu dhibahayo ardeyda soomaaliyeed oo loo maaleyn hayo argagixiso iwm. Waxaa kale ey ardeydu arkaan akhbaara negative ka ah oo media aduunka eey noo soo tabiso.
Halkaas waxaaa macrafoonka lagu soo dhaweeyey Mawo Marian Axmed Gaas oo ah madax uruka la dhaho RIAC oo ka dhisan Boston. Marian waxey Wasiiradda Caasha Gheelle ku soo dhaweysey macrafoonka isla markaas waxey ku nuux nuuxsatey iney ka mid tahey reer koofur, dad reer koonfur ah ey caawa nala joogaan. Waxey kale oo ey taa taabatey doorka dumarka, sida kuwii soo halgamey wakhtigii ey Soomaaliya ey xuriyadda u dagaalameysey.
Markii arinku halkaas marahayey waxaa qabsadey macrofoonka Wasiiradda Caasho Gheelle Diriye, Khudbadeeda waxey ka bilowde, salaan, mahadnoq ku socota qaban qaabiyaashii xafladda, ka qeybgalyaasha, ururadda RIAC, ACEDONE iyo intii na soo dhaweysey oo dhan. Marka labaad waxey ka hadashey iney madaam eey meel dheer ka timid iney eegto somaalia iyo danta ka dhaxeysa Qurbajoogta. Waxaa ugu muhiimsan in la I weydiin doon dadkii aad soo aragtey sidee baad ku soo aragtey? Iyo wareysiyo gaar ah si ey xog gaar ah uga hesho. Iyo xaqiiqa wadanka ka jirta iney ka duwantahey mid aad internetka ka akhrisataan. Wadanka wax wanaagsan baa ka jira, wax khaldana weey jiraan. Dalka wixii horumarin lahaana waa adinka oo markii aad ka soo tageen is badal baa ku yimid dalkii. Waxey kaloo ey tilmaantey inaan soomalia aduunku eysan maal gashan, sida Kenya oo mithaal u soo qaadatey, markii dhibaato ka dhacdey sida hadiiba loo nab daadiyey oo arinkooda wax aduunka ey uga qabteen. Balse Somalia eysan heysan fursadaa oo kale. Sido kale waxey taabatey iney dadka dibadda jooga ey wadanimadu ku yartahey sababna ey uga dhigtey ineyan ku fakarin iney wadankii ku laabtaan si aad wax uga qabataan baahidda tiradda badan ee ka jirta. Balse aad kaliyah colaada wax ka hurisaan iyo inaan la taagan tihiin su?aalo tiro badan oo ah ?maxaa waxaas loo qaban waayey?iyo sida eysan ku arkin dadkii eey u timid wixii eey ka fileysey siiba dadka da?da yar iyo waxa ey mustaqbalka ku fakarahayaan. Waxey Wasiiradda dadka ku boorisey iney isku duubmaan, iney ururka Qurbjoogta Puntland lala shaqeeyo oo la adkeeyo si loo hello resources wax ku ool ah iyo dad wax qabad leh intaba. Khudbada Wasiiradda guud ahaan waxey taabatey, amniga, tacliinta, horumarka, doorka qurbajoogta, burcadbadeedka, dhulka maqan, iyo dad la yiri dalal shisheey ayaa loo dhiibaa iwm. kaga bogo dhageysi.
Wasiiradda ka dib waxaa macarafoonka lagu casumey ruug cadaagii, Sharci yaaqankii caanka ahaa, Mudane Yusuf Osman Samantar ‘Bardecad’. Yusuf wuxuu ka hadley arinta dadka Somaalida ah ee soo cararey, isaga oo taabtey dadka Soomaaliyeed iyaga oon waxba ka warqabin bey wax ka sheegaan. Sidoo kale wuxuu taabtey arinta ku saabsaneyd dastuurka soomaaliyeed oo aheyd in qof haddii uu meel dambiga ku gallo in meesha lagu xukumo oo aan meel kale loo dhoofin. Wuxuuna taabtey dadka dalka wax beey ku leeyihiin ayuu yiri. Dhulkana lagama lahaan karo, vote waa gali karaa, waana la dooran karaa. Waa in sharciga la dhowraa ayuu yiri. Qanuunka federaalku waa ka xoog badan yahey kana goboleedka. Waana inaan dadka soomaaliyeed inta la qab qabto aan loo geeyn dad kale amaba dowladdo kale. Wuxuu taabtey rag wajiyadda soo duubta dadka ku leynhaya dhulka mar walba, waxaana suaal ah sidee beey ku surta gali kartaa arinkaas oo kale inuu mar walba dhaco, waa in boolisku wax ka qabta arinkaas, Ugu dambeyntii wuxuu yiri qof kasta oo soomaali ah oo yimaada dalka ayuu wax ku leeyahey sharci ahaan, hadalkiisa wuxuu ku soo gunaanadey dadka runta u sheega?.iwm
Habeenimadii Bishu markey aheyd Nov 14, waxaa Wasiradda Haweenka iyo Arimaha Qoyska Marwo, Asha Gheele Dirie ey u sameeyeen Gabdha Qurbajoogta ee reer Puntland casho sharaf oo aad loo soo agaasimey oo ka dhacdey xaafadda Health Street, Roxsbury, sidoo kale waxaa xaflaadaas laga casumey gabadha soomaaliyeed ee reer Boston. Xafladu si wanaagsan beey u dhacdey oo aanu dhammaan ka wadda maqsuudney. Xafladda markii hore waxey aheyd mid cilmiyeed oo u badneyd kala war qaadasho. Ka dib waxey isu badashey xaflad sugaaneed oo halkaas ayaa waxaa wacdaro ka muujisey Marwo Luul Gaalooti oo soo fatahdey sugaanteedii, ka dibna xafladii waxey Wasiirada ku xirtey mahdnoqo iyo gacan qaadid dadkii meesha isagu yimid.
Habeenimadii bisku markey aheyd Nov 15, 2009 waxaa casho sharaf loogu sameeyey Wasiiradda Haweenka iyo Arimah Qoyska,Marwo Asha Gheele Dirie aqalka Marwo Shahmaad Xalwo ee ku yaal xaafadda Broadway, xaafadda Somerville. Casho sharaftaas waxaa lagu casumey rag jabaabiir ah oo uu ka mid yahey Abdulaziz Nur Hersi, Mohamed Aden Dheere, Ahmed Arab, Abdulkadir Yasiin (ACEDOONE), Burhan Ismail Yusuf, Abdulkadir M.Mohamud (Hindi), Abdullahi N. Gurhan (Madey), Hussein Fiin, Ali M. Adan, Ahmed Nur Adam, Mohamed Y.Nur Godane, Hussein Mohamed, Abdulkadir Xalwo. Sidoo kale dhanka gabdha waxaa ka soo qeyb galey Marwo Amina HajI Diirei, Marwo Libin Bardacad, Marwo Ayaan Sheikh Nur, Xildhibaanad Fadumo Dahir, Marwo Luul Dhuux, Marwo Zahro Ali Mire, Marwo Suree Dirir, Marwo Asha Gheele Kaneec, Marwo Armia Yasiin Nur Godane, Marwo Zahra Mohamud Raage, Marwo Zainab Abdulrahman, Mawro Faduma Ummad,, iyo Marwo ?
Halkan ka dhegayso khudbadihii kulamada:
Khudbab: Marwo Caashe Gheelle Diriye
Khudbab: Sheekh Cismaan Siciid
Khudbab: Cabdulaahi Gurxan (Madey)
Khudbab: Maxamuud Muuse
Buraanbur: Luul Gaalooti
Khudbad: Maryan Muuse Boqor
Khudbad: Maryan Gaas
Aniga oo ah Shahmaad Xalwo, kana mid ah Ururka Qurbajoogta Puntland faraciisa Massachusetts, magaaladda Boston, waxaan dhammaan u mahadcelinhayaa rag iyo dumar intii nala soo dhaweysey Wasiiradda Haweenka iyo Arimaha Qoyska ee Puntland, Marwo Asha Gheele Dirie, oo wakhtigooda qaaliga ah na siisey sadexdii munaasabadood oo kala ahaa Nov 13, Nov 14, iyo Nov 15, 2009. Waxaan Sidoo kale mahad gaar ah u celinhaya dadka hoos ku xusan oo runtii siyaabo kala duwan uga qeyb qaatey soo dhaweyntii iyo sii sagootiskii Wasiiradda oo ey ka mid yihiin sida soo socota:
1) Amina Haji Diirie
2) Libin Bardacad
3) Xildhibaanad Fadumo Dahir
4) Ayaan Sheikh Nur
3) Armia Yasiin Nur Godane
7) Hibo HajI Hashi
8) Muluuko Dheere Dheere
9) Eman HajI Hashi
10) Naima Abdulle
11) Sucdi Hersi
12) Farxiya Ali
13) Luul Dhuux
14) Zahra Ali Mire
15) Sureer Dirir
16) Asha Gheele Kaneec
17) Zahro Rage
18) Zainab Abdirahman
19) Fadumo Ummad
Mahadsanid dhammaan mar kale.
Shahmaad A. Xalwo